Wasiirka gaashaandhigga ee dawlada federaalka oo Doolaw u tagay siidaynta xildhibaan Barre Hiiraale – Radio Daljir
Wasiirka gaashaandhigga ee dawlada federaalka oo Doolaw u tagay siidaynta xildhibaan Barre Hiiraale
Garbahaarray, June 13 – Wasiirka gaashaandhigga ee ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdixakiin Maxmuud Fiqi oo ku sugan gobolka Gedo ayaa sheegay in uu halkaasi u tagay sidii loo siidayn lahaa xildhibaan Barre Aadan shire Hiiraale oo muddo ku xiraa Doolaw.
Wasiir gaashaan-dhigga Cabdixakiin Maxmuud Xaaji ?Fiqi? oo u warramay Radio Daljit ayaa waxaa uu tilmaamay in uu la kulmay saraakiil Ethiopian ah oo ku sugan Doolaw ayna ka wadahadleen sidii loo siidayn lahaa xildhibaan Barre Hiiraale. Wasiirka ayaa waxaa uu sheegay in wax badani uga qabsoomeen arrimahaasi xilli dhawna uu filayo in la siidaayo xildhibaanka.
Wasiirka gaashaan-dhigga ee dawladda federal KMG ah ee Soomaaliya ayaa dhinac kale sheegay in ay wadaan dadaallo xooggan oo ay ku damacsan yihiin in ay ku hantaan ammaanka dalka, kuna qabsadaan gobollada ka maqan gacanta dawladda.
Wasiirka gaashaan-dhigga, ayaa sheegay carrabka ku adkeeyey in ay meeleeyeen qorshe miisaan culus oo dalka looga safaynayo ururka Al-shabaab oo uu sheegay in yihiin caqabadda kaliya ee hor-taagan hormarka iyo hana-qaadka dadka iyo dalkaba.
Mudane Fiqi, ayaa tilmaamay hawlaha joogitaankiisa Gedo in ay ka mid tahay sidii uu tababar ugu soo xiri-lahaa ciidamo kuwa dawladda oo tiro ahaan gaarsiisan illaa 550 askari, oo lagu tabarayey gobolka Gedo haatanna uu u so dhammaaday.